Ogaden News Agency (ONA) – Soomaaliya & Turkiga oo Heshiisyo Kala Sixiixday.
Soomaaliya & Turkiga oo Heshiisyo Kala Sixiixday.
Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo kusaabsan horumarinta dhaqaalaha iyo dhaqanka labada dal. Heshiiska waxaa labada dal u kala saxiixay Wasiiradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Turkiga
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo casumad rasmi ah ka helay dhigiisa Turkiga Erdogan ayaa booqashadiisu ku saabsanayd kor u qaadida taageerada Turkigu siiyo Soomaaliya iyada oo lagu kor dhinayo tayaynta wax soosaarka beeraha Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga Racep Tayyip Erdogan ayaa aamaaney dowladda cusub ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo, waxaa uu sheegay in Turkiga sii laba jibaari doono taageerada uu siiyo dowladda Soomaaliya.
Mr. Erdogan ayaa eedeeyey Beesha Caalamka, waxaana uu ku tilmaamey kuwo aan fulinin ballan qaadkooda gaar ahaan kaalmada loogu yaboohay Soomaaliya iyada oo Soomaaliya ay weli ka jiraan dhibaatooyin ka dhashey abaaraha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku casuumay Madaxweyne Erdogan in uu booqasho ku yimaado Soomaaliya, sida ugu dhow, sida ay shaacisay Wakaalada wararka ee Anadol oo laga leeyahay dalka Turkiga.